China High Quality AZ120 AZ150 Hot Dip Galvalume Steel Coil Manufacturers and suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Galvalume Steel eriri igwe > Ọkụ na -ekpo ọkụ Galvalume Steel Coil > AZ120 AZ150 eriri ọkụ Galvalume steel
AZ120 AZ150 Galt Galvalume Steel Coil nwere ọmarịcha spangle elu dị larịị. Ọdịdị mkpuchi aluminom pụrụ iche na zinc na -eme ka ọ nwee nguzogide corrosion dị mma, nguzogide ọkụ dị mma, nrapado dị mma n'etiti mkpuchi na ihe nkiri agba, arụmọrụ nhazi dị mma nke ịkụ ọkpọ, ịkpụ, ịgbado ọkụ, wdg.
AZ120 AZ150 Hot Dipped Galvalume Steel Coil enwetala aha ọma na South America, Africa, Middle East, Middle Asia na Southeast Asia.
2.Product oke (nkọwapụta)
55% Aluminom, 43.5% Zinc, 1.5% Silicon
Chromated Passivation, mmanu, Enweghị mmanụ, Mbipụta mgbochi mkpịsị aka
Softy, ọkara siri ike, ike zuru oke, G550
Eriri igwe arọ
3-5MT/eriri igwe ma ọ bụ ahaziri
Eriri igwe n'ime Dayameta
508mm ma ọ bụ 610mm
Nkwakọ ngwaahịa mbupụ Seaworthy
Ụdị Ụgbọ njem
Ụgbọ mmiri akpa, Ụgbọ mmiri nnukwu, Railway akpa,
Port na -ebugo
Tianjin, Qingdao, Ningbo, Shanghai na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ
15-25 ụbọchị mgbe ị natasịrị nkwụnye ego
TT na enweghị mgbagha LC na Sight
3. Njirimara Ngwa na Ngwa
AZ120 AZ150 Copper Galvalume Steel Coil nwere atụmatụ ndị a bara uru.
Efere efere galvalume na -ekpo ọkụ nwere ngosipụta ọkụ dị elu, okpukpu abụọ karịa mpempe akwụkwọ galvanized, a na -ejikwa ya dị ka ihe maka mkpuchi ọkụ.
2. Iguzogide okpomoku: Aluminom-zinc alloy steel plate nwere ezigbo nguzogide okpomoku ma nwee ike iguzogide oke okpomoku kariri 300 Celsius. A na -etinye ya n'ọtụtụ ebe na ọkpọkọ anwụrụ ọkụ, oven, ndị na -enye ọkụ na oriọna oriọna fluorescent.
A na -enweta nguzogide corrosion site na ọrụ nchekwa nke aluminom. Mgbe zinc na-agbaji, aluminom ga-emepụta okpokoro okirikiri nke aluminom oxide, nke na-egbochi ihe ndị na-eguzogide nsị na-emebi emebi n'ime ime.
4. Akụ na ụba akụ na ụba:
Mpaghara mpempe akwụkwọ galvalume karịrị 3% karịa nke mpempe akwụkwọ galvanized nwere otu ịdị arọ na otu ọkpụrụkpụ mkpuchi n'ihi na njupụta nke 55% AL-Zn dị ala karịa nke Zn.
Aluminom-zinc efere nwere nrapado magburu onwe ya, nke enwere ike ịcha ya na-enweghị ọgwụgwọ.
AZ120 AZ150 Copper Galvalume Steel Coil nwere ngwa dị iche iche.
Mwube: akwa ụlọ, mgbidi, ebe ndọba ụgbọala, mgbidi na -anaghị ada ụda, ọkpọkọ na ụlọ e ji ígwè rụọ, wdg.
Ụgbọ ala: ihe mkpuchi, ọkpọ ọkpọ, ihe nhichapu, tank mmanụ, igbe gwongworo, wdg.
Ngwa ụlọ: ogwe azụ azụ friji, stovu gas, ntụ oyi, ekwenti microwave, kabinet eletriki, wdg.
Ọrụ ugbo: hoggery, ụlọ ọkụkọ, igbe nri, griin haus, wdg.
Ndị ọzọ: mkpuchi mkpuchi ọkụ, ihe na -ekpo ọkụ, igwe nkụ, igwe mmiri, wdg.
Anyị nwere asambodo nke ISO9001, SGS na BV iru eru maka AZ120 AZ150 Hot Dipped Galvalume Steel Coil.
5.Nnyefe, Mbupu na Ije Ozi
Anyị nwere oge nnyefe ọsọ ọsọ, ahịrị mbupu ọkachamara na ọrụ 24-hostline.
1. Ị na -enye nlele? ọ bụ n'efu ka ọ bụ mgbakwunye?
Anyị na -enye nlele efu, mana ndị ahịa ga -akwụ ụgwọ ụgwọ ụgbọ elu. Ozugbo ị kwadoro usoro nnwale, anyị ga -akwụghachi ụgwọ ikuku.
2. Kedu ka njikwa mma gị dị?
Anyị nwere usoro njikwa njikwa siri ike site na akụrụngwa ruo ngwaahịa emechara, anyị ga -agwa ndị ahịa anyị ọkwa usoro ọ bụla site na vidiyo ma ọ bụ foto. Site n'ụzọ, anyị nwere ISO9001, SGS, BV na CE akwụkwọ ma nabata nyocha ọ bụla nke atọ dịka ịchọrọ.
3. Kedu ka ọrụ ịre ahịa gị mgbe erechara dị?
Anyị nwere ọkachamara mgbe-sales ọrụ. Mgbe ịchọta nsogbu ọ bụla mgbe ị nwetasịrị ihe anyị nwere ihe akaebe a pụrụ ịdabere na ya, anyị ga -ahụ maka mfu niile ozugbo ihe mberede kpatara anyị.
4.M nwere ike ịkpọtụrụ onye ahịa gị n'obodo m ka m ghọta ụlọ ọrụ gị?
Ee, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị, ahịa anyị ga -akpọtụrụ gị wee nye ozi ahụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: AZ120 AZ150 Galtum Galvalume Steel Coil, Ndị na -emepụta ihe, ndị na -ebubata ya, N'ogbe, Zụrụ, Ụlọ ọrụ, ahaziri ya, na ngwaahịa, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ọkọnọ, dị ọnụ ala, mbelata, ọnụ ahịa dị ala, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa. , Nkwupụta, SGS, BV, Kacha ọhụrụ, Ogo, na -adigide, akwụkwọ ikike afọ iri
AFP Mbipụta mkpịsị aka mkpịsị aka Galvalume Steel Coil
AZ100 na -ekpo ọkụ Galvalume Steel Coil